Etazonia : Fanehoankevitry ny tontolon’ny Twitter tamin’ny lahatsoratra iray nosoratan’i Nicholas Kristof momba ny finoana Silamo tao anatin’ny New York Times · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2019 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, عربي, македонски, Español, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Martsa 2011)
[rohy amin'ny teny anglisy] Niteraka onjam-panehoana hevitra tao amin'ny tontolon'ny Twitter androany ny matoandahatsoratra nosoratan'i Nicholas Kristof, mpanao gazety bekotro maroholatra iray ao amin'ny New York Times. Resahan'ilay matoandahatsoratra, nitondra lohateny hoe “Ny finoana Silamo ve no olana?“, ireo singa marobe izay, araka ny lazain'i Kristof, dia mety ho fototra niandohan'ny maha-“hondrankondrafana” ny tontolo arabo.
Tao amin'ny Twitter, niteraka fanehoankevitra mamay izy io, izay nilazan'ny olona manerana ny tany ny hatezeran'izy ireo tamin'i Nicholas Kristof sy ny New York Times amin'ny ankapobeny. @avinunu no mamintina ny toedraharaha:
Mba hamaritana ireo Arabo dia ampiasain'ilay mpanao matoandahatsoratra, @NickKristof, ireo teny toy ny hoe “hondrankondrafana”, izay tsy ho sahiny nosoratana velively raha hiresaka ny hafa izy.
@NickKristo Asehon'ny antontanisa fa ao Amerika, mbola lavitra be any aorian'ireo fotsy ny mainty hoditra raha resaka fiahiana fahasalamana, fanabeazana ary fanànana harena. Satria ve olona “hondrankondrafana” ireo mainty hoditra?
Avy eo, nanao sarinteny tamin'ny traikefa be ananan'ilay mpanao gazety, Nicholas Kistof momba an'i Afrika, manampy izy :
Avelao aho hametraka fanontaniana aminao, @NickKristof, tsy mbola nampiasa manokana ny teny hoe “hondrankondrana” ho entina mamaritra an'i Afrika ve ianao?
Taorian'ny valintenin'i Nicholas Kristof tao amin'ny Twitter (“Miala tsiny amin'ireo rehetra tezitra tamin'ilay lohatenin'ny lahatsoratro momba ny finoana Silamo — fa marobe ny olona misaina azy io & manana porofo vaovao izahay” @sickjew demande :
Heverinareo ve fa i @NickKristof dia mety hanoratra tsanganana hitondra lohateny hoe : “Ny jodaisma ve no olana?” “Misaina” an'izany ny olona.
Ao amin'ny Twitter, ny hafa manontany tena momba ilay lohatenin-gazety (izay manontany raha toa ka olana ny finoana silamo) ary manosoka hevitra hoe misy singa hafa maro tokony horaisina anaty kajikajy. tondroin'i @cellabiaole amin'izany ny fanohanan'ny amerikàna ireo mpanao didy jadona ao Afovoany Atsinanana:
@NickKristof tsy dia fantatr'izao tontolo izao loatra hoe i Etazonia no manohana ara-bola ireo mpanao didy jadona mpamono olona & manohana ireny revolisiona ireny ny rehetra. Sokafy ny maso.
Ho valin'ny bitsika iray hafa nalefan'i Kristof (“@Soraal Mazava ho azy fa hondrankondrafana ny ao Afovoany Atsinanana. Jereo ny tahan'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra, ny asa an-tery asaina ataon'ny vehivavy, ny rafitra politika. Ny fanontaniana dia hoe nahoana”), manohana i @DianaValerie hoe :
@NickKristof @soraal fanehoankevitry ny tsy mahay na inona na inona io, izay tsy mandray ho anaty kajikajy ny fanohanantsika an'ireo mpanao jadona misakana ny tsy handrosoan'ny mpiray tanindrazana aminy ireo.
Ny New York Times ve no olana ?
Ny sasany mahamarika fa na ny Times aza dia matetika manilika ireo feo hafa. @techsoc manamarika hoe :
@jilliancyork Amiko dia mitovy ihany raha toa mandray anjara amin'ireny adihevitra matotra momba ny Afovoany Atsinanana ireny i Kristof, rehefa afaka koa “isika” mandray anjara aminà adihevitra iray momba izay zavatra tsy manjary ao Andrefana ao.
@humanprovince toa leo an'ireo mpanao gazety ao amin'ilay gazety mpiseho isanandro :
Tena mendrika zavatra tsaratsara kokoa i Amerika fa tsy ireny lazaina fa manampahaizana amin'ny vaovao fohy tefena ambony latabatra ireny Brooks, Friedman & @NickKristof: http://nyti.ms/hRkYJF
@krmaher mihevitra ny olana ho avy any amin'ireo mpamoaka lahatsoratra :
Mba tsy hitanilàna, tsy ratsy manao ahoana ny ambiny amin'ilay tsanganana vaovao nataon'i @NickKristof, fa ilay lohateny no ohatra mibaribary amin'ny tsy fitovian'ireo fenitra. Tsy afaka miala bàla ireo mpamoaka lahatsoratra.
Saingy @emjacobi mitondra fanamarihana hoe :
@krmaher Manantena zavatra tsara noho izany avy amin'ireo mpamoaka lahatsoratra, indrindra fa ireo mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny NYT ihany no manoratra izay lohateny tiany atao!
Miray hevitra amin'i Kristof
Na tsy miombona hevitra amin'i Nicholas Kristof aza ny ankamaroan'ireo resaka ao amin'ny Twitter, misy sasany mihevitra fa ny tsanganan-dahatsoratra nataony dia mikitika zavatra saropady. @walidbey milaza fa :
@NickKristof Feno fahasahiana ny lahatsoratrao momba ny finoana silamo. Heveriko fa ny rafitra ara-pitsarana any amin'ny firenena islamika dia tsy manana ny toerany ao anatin'ny tontolo maoderina. Tokony averina arafitra ny #Islam.
@franyafranya maka fomba fijery somary voalanjalanja:
@NickKristof nanaraka lalantsaina tsara hatrany amin'ny “olana psikolojika” ireo tohankevitra – tsy misy fanamarinana. Ary fomba filaza voafetra ihany ny hoe “hondrankondrafana”.
@JeSuisBelEsprit mihevitra hoe tsy azo lazaina ho tsy mitombina tanteraka ilay lahatsoratr'i Kristof :
@NickKristof Tsara ho an'ny fanahy ilay fanadihadiana fitsikerana. Ny finoana silamo fotsiny dia efa anjorian'olombelona ary toy ny zavatra rehetra nataon'ny olona dia “tsy voatery ho tafita foana”